Maitiro Ekuwedzera Ekutsvaga Kutsvaga Nekutsvaga, Kuongorora, uye Kudzoreredza 404 Zvikanganiso MuWordPress | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 24, 2021 China, Kurume 24, 2022 Douglas Karr
Tiri kubatsira mubhizimusi mutengi izvozvi nekushandisa nyowani WordPress saiti. Ivo inzvimbo yakawanda, mitauro yakawanda bhizinesi uye ndakave nemimwe mibairo yakaipa maererano nekutsvaga pamusoro pemakore apfuura. Pataive tichironga yavo nyowani saiti, isu takaratidza mashoma mashoma nyaya:
matura oruzivo - ivo vaive nzvimbo dzinoverengeka mumakore gumi apfuura nemusiyano unoratidzwa mune yavo saiti chimiro URL. Patakaedza mapeji ekare ekare, vaive makumi mana nemanaiti pane yavo yazvino saiti.
Backlinks - patakaita ongororo ye backlink tichishandisa Semrush,
Translation - vazhinji vevateereri vavo ndeveSpanish, asi saiti yavo yaivimba chete pane bhatani rekushandura panzvimbo pekumisikidzwa, mapeji akashandurwa nemaoko pane saiti.
Saiti yavo yekupedzisira yaive anazvo nesangano reSEO ravaishandira… mumaonero angu tsika ine mumvuri chaizvo iyo inobata muridzi webhizinesi. Saka, kuenda kumberi taizofanirwa kugadzira saiti nyowani kubva pakutanga uye kuitisa… mubhadharo muhombe kumutengi.
Chikamu chakakosha chezano nyowani kutora mukana kune izvo zvitatu nyaya dziri pamusoro. Tinofanirwa kuona kuti tinobatanidza kunongedzera kumapeji ese asipo (3 zvikanganiso) Uye tinokwanisa kushandisa avo vanoshandisa mitauro yakawanda nekutsvagisa mapeji. Muchikamu chino, ini ndiri kuenda kuzotarisa pane iyo 404 yekukanganisa nyaya - nekuti iri kukuvadza masosi avo ekutsvaga.
Nei 404 Zvikanganiso Zvakaipa Kune SEO Rankings
Kurerutsa tsananguro kune vatengi uye mabhizinesi, ini ndinogara ndichivaita kuti vazive kuti injini dzekutsvaga indekisi peji uye rirongedze kune mamwe mazwi akakosha nezvirimo zviri papeji iro. Zvisinei, ivo chinzvimbo peji rinobva mukuzivikanwa kwayo - kazhinji rinoshandurwa kune backlinks kune mamwe masayiti.
Saka… fungidzira kuti une peji pane yako saiti kubva makore apfuura ayo anoteedzana chaizvo uye akabatana kubva kwakasiyana masosi. Iwe unobva wavaka saiti nyowani uko iro peji rinoenda. Mhedzisiro yacho ndeyekuti apo injini dzekutsvaga dzinokambaira backlinks… kana mushandisi pane imwe saiti anodzvanya chinongedzo… zvinoguma nekanganiso 404 pane yako saiti.
Ouch. Izvo zvakashata kune ruzivo rwevashandisi uye zvakashata kune ruzivo rwevashandisi veinjini yekutsvaga. Nekuda kweizvozvo, injini yekutsvaga inofuratira backlink… iyo inozopedzisira yadonhedza masimba esiti yako uye chinzvimbo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti backlinks pane ine chiremera saiti hainyatso kupera! Sezvo isu takavakira nzvimbo nyowani dzevatengi uye takadzoreredza zvakanaka ma link ekare kuzvinhu zvitsva… isu takaona aya mapeji achikwira kumusoro kumusoro kwemapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga (SERP).
Kana iwe uine iyo agency yakanangana neyako organic yekutsvaga traffic (uye YEMAHARA webhusaiti dhizaini agency inofanirwa kunge iri) kana kana iwe uine SEO chipangamazano uyo ASINA KUITA basa iri, ndinotenda ivo vanonyatso kuregeredza muhunyanzvi hwavo. Majini ekutsvaga anoramba achiva sosi yepamusoro yetraffic kune akakodzera tarisiro nechinangwa chekutenga.
Saka, neizvozvo… kana iwe uchichinjazve saiti yako, ita shuwa kuti urikuongorora uye kuendesa yako traffic kune matsva mapeji nemazvo. Uye, kana usiri kugadzirisazve saiti yako, iwe unofanirwa kunge uchiongorora ako mazana makumi mana nemakumi mana emapeji uye uchivaendesa zvakanaka!
ONA: Kana usiri kutamira kune imwe saiti nyowani, unogona kusvetukira wakananga kuChitatu pane ino maitiro kungo tarisa uye kuendesa zvakare 5 mapeji.
Nhanho 1: Pre-Launch Audit Yeiyo Yazvino Saiti
Dhawunirodha Zvese Izvo Zvinhu - Ndinoita izvi nehukuru OSX app inonzi SiteSucker.
Tora Rondedzero Yese eazvino ma URL - Ndinoita izvi ne Kurira Frog.
Tora Rondedzero Yezvese Backlinks - kushandisa Semrush.
Ikozvino, ini ndine zvese zvinhu uye peji rega rega pane yavo yazvino saiti. Izvi zvichaita kuti ndikwanise kunyora mepu yega yega yeaya zviwanikwa kumakwara matsva pane ino saiti nyowani (kana ichida kuendeswa).
Nhanho 2: Pre-Kutanga Chirongwa Iyo Saiti Hierarchy, Slugs, uye Mapeji
Nhanho inotevera ndeyekuongorora zvirimo zvirimo uye kuona kuti tingarerutsa sei nekuvaka a raibhurari yezvinyorwa izvo zvakanyatsorongedzwa uye zvakarongeka pane iyo nyowani saiti. Kazhinji yenguva, ini ndinogadzira mapeji asina chinhu muchiitiko cheWordPress kuitira kuti ndive nerondedzero yekupedzisa gare gare kune vanyori vangu nevagadziri kuti vashande pairi.
Ini ndinogona kudzokorora zvekare zvekare ma URL nemaaseti kuti awedzerezve magwaro ekunyorwa kuitira kuti zvive nyore kuona kuti ndine zvese zvinodiwa zvirimo uye hapana chinoshaikwa kubva kune itsva saiti yaive pane yekare saiti.
Nhanho 3: Pre-Kutanga Mepu yeakare ma URLs kuNew URLs
Kana isu tichigona kurerutsa iyo URL chimiro uye kuyedza kuchengeta iyo peji uye kutumira slugs ipfupi uye yakapusa, isu tinoita. Ndakaona pamusoro pemakore kuti nepo kudzoreredza kunofungidzirwa kunge kurasikirwa nechimwe chiremera… optimization yavo inotyaira yakawedzera kubatanidzwa, iyo inoshandura kune chinzvimbo chiri nani. Ini handichatyi redirect peji rine chinzvimbo chepamusoro kune URL nyowani pazvinonzwisisika. Ita izvi muspredishiti!
Nhanho 4: Pre-Launch Kunze Kudzoreredza
Ndichishandisa spreadsheet muChitatu 3, ini ndinogadzira tafura iri nyore yeiyo URL iriko (isina dura) uye iyo URL nyowani (ine duraini). Ini ndinopinza aya anodzoreredza mu Rank Math Masvomhu Plugin usati watanga saiti nyowani. Rank Math ndiyo yakanakisa WordPress plugin yeSEO, mumaonero angu. Padivi katsamba… maitiro aya anogona (uye anofanira kuitwa) kunyangwe kuitwa kana uri kufambisa saiti kune domain nyowani.
Nhanho 5: Vhura Uye Ongorora 404s
Kana iwe waita nhanho dzese kusvika zvino, une saiti nyowani, zvese zvinongedzo mukati, zvese zvirimo, uye wagadzirira kuvhura. Basa rako harisati rapera… unofanirwa kuongorora saiti nyowani kuti uone chero mapeji makumi mana nemana uchishandisa zvishandiso zviviri zvakasiyana:
Google Search Console - panongovhurwa saiti nyowani, iwe uchazoda kuendesa iyo XML sitemap uye wozotarisa muzuva kana kuti uone kana paine zvanetsa nesaiti nyowani.
Rank Masvomhu SEO Plugin's 404 Monitor - Ichi chishandiso chaunofanira kushandisa kazhinji… kwete chete paunenge uchivhura saiti. Iwe unozofanirwa kuitisa iyo iyo Rank Math Dashibhodhi.
Semuenzaniso, isu takaparura saiti yenzvimbo yakawanda-nzvimbo Chiremba wemazino uyo anonyanya kugadzirisa vana vane Medicaid kufukidza. Rimwe remapeji atakaona aive ne backlinks anga asina kuvharwa yaive chinyorwa, Meno eVacheche 101. Saiti yaivapo yanga isina chinyorwa. Muchina weWayback waingova neexcerpt. Saka patakatangisa saiti nyowani, takave nechokwadi chekuti tine chinyorwa chakazara, infographic, uye zvemagariro magiraidhi anotungamira kubva kuiyo yekare URL kuenda kune nyowani.
Tichangovhura saiti, isu takaona kuti redirect traffic yakanga yave kuenda kune iyo peji idzva kubva kune iwo ekare ma URL! Iyo peji rakatanga kutora imwe yakanaka traffic uye chinzvimbo zvakare. Isu hatina kuitwa, zvakadaro.
Patakatarisa iyo 404 Monitor, takawana maURL akati wandei ane "mazino evacheche" anga achimhara pamapeji makumi mana nemana. Isu takawedzera iwo akawanda chaiwo nzira dzekutungamira kune iyo nyowani peji. Padivi katsamba… tinogona kushandisa a kutaura kwakajairika kutora ma URL ese asi isu tiri kungwarira kutanga.
Iyo skrini iripamusoro iri chaizvo Rank Math Pro iyo inosanganisira kugona kuisa mumapoka ako marongedzo… chinhu chakanakisa. Isu takaendawo neRank Math Pro nekuti inotsigira akawanda-nzvimbo maschemas.
Ikozvino, iro peji ndiyo yavo # 8 yakanyanya kutengeswa peji pane ino saiti nyowani mukati mevhiki yekutangisa. Uye paive ne 404 peji ipapo kwemakore akati wandei chero munhu paanosvika! Iwo waive mukana wakakura wakarasika waisazowanikwa dai isu tisingangwariri nezve kudzosera zvakanaka uye kuongorora zvekare ma link aivapo kunze kwewebhu kune yavo saiti.
Chinzvimbo cheMathematics zvakare chine chinyorwa chakadzama chekugadzirisa zvikanganiso makumi mana nemazana makumi mana zvandinokurudzira kuti uverenge.
Rank Math: Maitiro ekugadzirisa 404 Zvikanganiso
Tags: 404404 zvikanganisokuongororakukamba saitigoogle yekutsvaga konikupinza redirectsmepu urlschepamusoro chinzvimbochinzvimbo chemasvomhu pluginchinzvimbo chemasvomhu seochinzvimbo chemasvomhu seo pluginchepamusororedirectskuchema kwedatyakutsvagisa chinzvimbosemrushseorankingsnyokasaiti inocherasiteuckerWordPress